Yoko Ịdị Elu na Ịdị ™ sọrọ naanị 2013 New Usoro | oku: 09897304484
obibiOlee Yoko & OKA n'Ọrụ?ogo MmemmeAchọrọ-eto ogologo?Testimonialiji Ugbu a,Akpọtụrụ AnyịAtụmatụ
Ike gwụrụ Of Ịbụ Short? Achọrọ eto ka ogologo ka gị na Ndị Enyi? Na-enwe olileanya Iji Nweta Ndị Extra u Ole na Ole sentimita asatọ & Onwe Onye Nwee Obi Ike?
Achọpụta na Revolutinary Ịdị Elu na Ịdị Mmụba na Ngwaọrụ Ọ Pụrụ Isi Nyere Gị Na-eto ogologo Ma Dịkwuo Gị Ịdị Elu na Ịdị kwesịrị Na Dị 3 Ọnwa ole na ... meela ya n'ezie n'ezie!
Ogo Mmụba Ngwaahịa
Na -adịbeghị anya, n'oge gara aga, Asia innovators nwere strived kwupụta aza nkịtị na-elekọta mmadụ nsogbu effecting òtù ọha mmadụ. Na usoro nke ha na -achọpụta ihe ọhụrụ undertakings , ụfọdụ ndị ọkachamara na emebela akpụkpọ ụkwụ nanị na -arụ ọrụ ebube n'ihi na n'ụzọ anụ ahụ dị mkpirikpi ndị mmadụ. A akpụkpọ ụkwụ Ozugbo ọbụ , nke na- a maara dị ka Yoko wee Oka elu elu ngwaọrụ nwere nweela ezigbo ewu ke Asia na ọbụna ndị fọdụrụ nke ụwa. Ọ na- arụ ọrụ na ụkpụrụ a Chinese technology dabere na echiche nke reflexology ke igba okpukpu . N'ime Asia ahịa , nke a na akpụkpọ ụkwụ na- ahịa dị ka a dị elu increaser . Site na ihe n'ọnọdụ , ọ pụrụ n'ụzọ dị irè dịkwuo nkịtị dị elu nke ndị mmadụ n'otu n'otu nke afọ abụọ eche na ya amaghị . N'adịghị ka ihe ụmụ mmadụ na ibu homonụ , ya mmepe mesie na ngwaọrụ na-arụ ọrụ n'ebe na-aba ụba mmadụ dị elu na-enweghị na-eme ihe ọ bụla dị n'akụkụ mmetụta .
Site na ndu n'ọnọdụ , ozu dị elu a na -achịkwa nke mmepe nke ogologo na-eme ka ọkpụkpụ ndị ahụ skeletal usoro . Ukpụhọde ke size na udi a ogologo ọkpọ relies na mmetụta nke ibu homonụ . A ibu homonụ na- secreted site pituitary akwa n'elu n'ikuku nke ntụziaka site n'ụbụrụ . Ndị mmadụ n'otu n'otu na-emekarị ntọt ke elu site pubati ka odika afọ 25 . Ụfọdụ ikpe , ibu akwụsị tupu mgbe mmadụ ghara esịm n'ụzọ ot n'ịdị elu. Ọnọdụ a emee n'ihi ọrụ gland akwụsị atọhapụ ibu homonụ ; ntem na-eme ka ọkpụkpụ na fuuz ọnụ igbochi n'ihu mmụba n'ịdị elu . A onodu ahụ, Yoko dị elu dịkwuo akpụkpọ ụkwụ ọrụ site wetere ntọhapụ nke ibu homonụ nke pituitary glands . Ozu si vertebral usoro nke toso ngalaba mụ na fusing ofụri otu eyouwem . Nke a pụtara na akpụkpọ ụkwụ ga-akpali ibu oge ọkpọ nkebi a, na-eduga na elu elu .
Ewepu mmetụta kpọmkwem elongation nke vetikal vertebral usoro , Yoko na Oka Ozugbo ọbụ enhances ezi ahụ ike site na Ọrụ ọbara nrugharị , mma mgbaze na ekemende eme nri metabolism udu . Nke a pụtara na ahụ ga-enwe ihe nri na-eji maka na mmepe na nzube ya. Kiet ke otu availed nri na-agụnye , ndị dị ka calcium na site , nke dị oké mkpa na -ewu ụlọ nke a ike skeletal mebere atumatu . Ke idaha enye emi, ke ikpehe mma ahu ike na metabolism ọnụego enye ntụkwasị mmiri nke elu -abawanye . A juncture , anyị nwere ike ịghọta na eziokwu na Yoko na Oka Ozugbo ọbụ na-arụ ọrụ n'ebe na ijikọta ọtụtụ ahụike na ịbawanye were gwọọ ikpehe ke wetere a vertebral ibu usoro.
Yoko elu increaser edide ke ọdịdị nke plastic Ozugbo ọbụ eyi n'okpuru akpụkpọ ụkwụ. N'aka nke ọzọ , Oka bụ insole enịm n'ime akpọ ụkwụ a. Ma ndị a na ngwaọrụ ebi ọrụ nke na-akpali akpali glands maka ntọhapụ nke ibu homonụ . Iji elicit ịrịba nzaghachi, ndị ọrụ kwesịrị iyi nanị n'ihi na ọ dịghị ihe ọzọ 40 nkeji na otu ụbọchị , mgbe na-eje ije na a ngwa ngwa, ijeụkwụ . Ya mere, ihe nile mmadu na -egbo mkpa ime bụ na-eyi nanị na-eje ije . Isi nzube bụ iji hụ na naanị n'ime akpụkpọ ụkwụ ego n'anya kpaliri dị ka otu onye na-eme ka na-eje ije strides . Nsonazụ ike ịmalite ndinyene n'ime oge nke ọnwa atọ . N'ihi na kacha na-achọsi ike na mmetụta , ndị naanị ike eyi maka ruo 12 ọnwa. M na 28 ma-akwụsị na-eto eto n'ihi na n'oge gara aga 6 isua. Mgbe eji gị ngwaahịa, m malitere na-eto eto ọzọ! Olee otú ebube
M ga-dị ka ikwu gị ngwaahịa bụ egwu. M emewo si 5 "2 ọnwa 10 gara aga, iji 6" 1. M ike ikwere na ya. Yoko bụ n'ezie ịtụnanya.
Pịa iji na-agụ nkọwa
Ọ bụrụ na ị chọrọ ka na-eto eto ogologo, na-agụ ihe a...
Ọtụtụ puku ndị mmụta sayensị nakwa ọgwụ na ihe akaebe.
Ibu "Ịdị Elu na Ịdị Mata Mgbatị" ebook
Ihe niile backed Site a 100% efu Egwu nkwa ... Gbakwunyere na ị na-niile Bonuses
Ihe mere i kwesịrị malite iji Yoko
obibi Olee Yoko & Oka n'Ọrụ? ogo Mmemme Achọrọ-eto ogologo? Testimonials iji Ugbu a, Akpọtụrụ Anyị nzuzo